सभ्य र सुसंस्कृत समाजमा भ्रष्टाचार नहुने
भक्तपुर, २४ भदौ। नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घअन्तर्गतको भक्तपुर मिनिबस एकाइ समितिको दोस्रो अधिवेशन तथा चौथो वार्षिक साधारणसभा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालको आतिथ्यमा शनिबार सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा उहाँले सभ्य र सुसंस्कृत समाजमा भ्रष्टाचार नहुने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, 'अहिलेसम्म भ्रष्टाचार बढ्दै आएको कारण सरकारमा गएका पार्टी र नेताहरू सभ्य नभएरै हो। नेमकिपाले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने लक्ष्यसहित राजनीति अगाडि बढाउँदै छ। पूँजीवादी सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री एक चम्चा पानी हो। यसले व्यापक जनताको प्यास मेटिंदैन। यसकारण नेमकिपा पूँजीवादी सरकारमा नगएको हो।'
सांसद सुवालले भन्नुभयो, 'काठमाडौं उपत्यका र नेपालको अन्य सहर अव्यवस्थित हुँदा सार्वजनिक यातायातको पार्किङसमेत अस्तव्यस्त भएको छ। भक्तपुरबाट काठमाडौंको उत्तरतर्फ बौद्ध जोड्ने र ललितपुरको सातदोबाटो जोड्ने नयाँ वैकल्पिक सडक निर्माण भए यातायात सेवा र पार्किङ व्यवस्थित हुनेछ। यो प्रस्ताव नेमकिपाले धेरै अगाडि नै सरकारसम्म पुर्‍यायो तर आजसम्मका सरकारकाहरू संवेदनशील नहुँदा काठमाडौं उपत्यका अस्तव्यस्त भएको हो। सरकारमा गएका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा डुबेपछि कर्मचारी संयन्त्र कसरी हुनसक्छ?'
नेक्रामजदुर सङ्घका केन्द्रीय सहसचिव उपेन्द्र सुवालले नेक्रामसङ्घले नेपाली मजदुरहरूको पक्षमा गरिरहेको सङ्घर्षका बारेमा चर्चा गर्दै विश्व प्रसिद्ध मजदुर आन्दोलनबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो।
नेक्रामजदुर सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले भक्तपुर नगरलाई ज्ञानविज्ञानको केन्द्र र सफा नगर बनाई पर्यटक गन्तव्यस्थ स्थल बनाउने भनपाको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कोटेश्वर पूर्व यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बलराम त्वानाबासु, भनपा वडा नं. ४ का अध्यक्ष कुमार चवाल, भक्तपुर मिनिबस सेवा समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महर्जन, पूर्वअध्यक्ष राजन कसलवट, पूर्वअध्यक्ष रामकाजी भुजु, विश्वनाथ प्रधानाङ्ग, विष्णुप्रसाद न्यौपानेलगायतले बोल्नुभएको थियो।
कार्यक्रम समितिका अध्यक्ष शिवराम त्वानाबासूको अध्यक्षतामा भएको थियो।
साधारणसभाको बन्द सत्रबाट शिवराम त्वानावासूको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ। समितिको उपाध्यक्षमा भोला न्यौपाने, सचिवमा विश्वनाथ प्रधानाङ्ग, सहसचिव राजाराम बासुकला र कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण सुवाल रहनुभएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा विकास चौगुठी, रमेश लामिछाने, हरिसुन्दर साख, सरोजकुमार न्यौपाने, महेश खड्का र मैयाँश्वरी न्हुछे रहनुभएको छ।